पाँच सय कमाउन ६० वर्षमा पनि दस घण्टा भारी बोक्दै, भन्छिन, नगरी खान पुग्दैन(भिडियो हेर्नुस ) – Charchit Entertainment
मानिस मात्र होइन बाच्नका लागि सम्पुर्ण जीव जन्तु केही न केही गरेर आफ्नो गुजरा गरिरहेका हुन्छन । जब बिहान बेलुका खान लाउन पुग्ने हुन्छ तब अन्य आवश्यकताहरु थपिदै जाने गर्छ । तर कतिपय अवस्थामा भने खान लाउन नै समस्या हुने गर्दछ । रात दिन काम गरेर पनि बिहान बेलुकाको छक टार्न समस्या हुने पनि धेरै छन । अझ वृद्ध अवस्था, दुख बिराम इत्यादि अवस्थामा भने अझ पिडा*दाय अवस्था हुने गरेको देखिन्छ ।
तम्घास, रातमाटा बस्ने एक 60 वर्षिय खिमा बि. क. को अहिले अवस्था यस्तै छ । उनी बिहान बेलुकाको छाक टार्न कै लागि साठी वर्षको उमेरमा पनि डोकोमा भारी बोकेर आठ दस घण्टाको बाटो हिन्दै जान्छी र केही पैसा लिएर घर आउँछिन । खिमा जङ्गलबाट पात टिपेर तम्घास बजार बेच्न जान्छिन । साथै अरुको तरकारी, अन्य सर समान पनि बोकेर बजार लागि बेचिदिन्छिन जसबाट केही कमाए छाक टार्ने गरेको बताउँछिन्।
खिमा अहिले आफ्नी छोरी सग बस्दै आएकी छिन । त्यहा नि अवस्था उस्तै छ । त्यसैले उनले आफै दुख गर्नु परेको बताउछिन । उन छोरी र दुई वर्षिय नातिनी सगै बस्छिन । हुनत रातमाटाबाट तम्घास जाने मोटरबाटो पनि छ तर खिमासगँ गाडी चढ्ने पैसा छैन, उनी भन्छिन :- जम्मा दुई चार सय कमाई हुन्छ त्यो पनि बस चढेर जादा कति नै बचत हुन्छ र ? खाजा त भनेको बेला खाने पैसा हुदैन र भोकै भारी बोकेर हिड्नु पर्छ बस कसरी चढ्नु र ?
खिमाका श्रीमानले कान्छी श्रीमती बिहे गरेर छोडेर गए पछि उनले यस्ता कयौ दुख झेल्दै आएकी छिन । श्रीमानले छोडेर गए देखि सन्तान हुर्काउन आफुले यस्तै दुख गर्दै आएको खिमाले बताइन । अहिले पनि उनी बिरामी छिन । बिरामी भएकोले खाना खान पनि मन नलाग्ने, आफुलाइ मन लागेको खान पैसा नहुने उनले बताइन । उनको दिनचर्या जङ्गल जाने सालको पात टिप्ने बजार लगेर बेच्ने त्यही बाट कमाएको केहि पैसाले दुई छाक टार्ने यसै गरि बित्ने गरेको बताउछिन
खिमाका अनुसार अहिले उनका श्रीमानलाई पनि कान्छी श्रीमतिले छाडेर हिडेकी छिन रे । उनका श्रीमान पनि अहिले एक्लै बस्दै आएको उनले बताइन । अहिले श्रीमान सगै बस्ने मन छैन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन ` म बस्दिन, अर्कि लिएर यो अवस्थामा छोडेर हिडेको छ अब के सगै बस्नु फेरि ।´ उनलाइ अहिले श्रीमान कहाँ बस्छन त्यो ठ्याक्कै थाहा नभएको तर कहिले काहीँ बाटो तिर हिन्दा देख्ने गरेको बताउछिन । बाटोमा देखे पनि उनिहरुबिच बोलचाल भने हुदैन । (तल भिडियो हेर्नुस )
आफ्नै छोरी लिएर बाउ फ*रा*र, छोरिले आमालाई भनिन बाउसगँ डि*भो*र्स देऊ(भिडियो हेर्नुस)